Madaxweyne Waare “Galmudug oo toosta waa Hirshabeelle oo toostay” + Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Madaxweyne Waare “Galmudug oo toosta waa Hirshabeelle oo toostay” + Sawirro
Dhuusamareeb-(SONNA)-Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Madaxwaynaha Maamulka Hir-shabeele Maxamed Cabdi Waare , ayaa Maanta gaaray Magaalada Dhuusamareb ee Caasimada Dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxwayne Waare ayaa waxa uu sheegay inay Galmudug u yimaadeen bogaadinta howlaha uu Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ka wado Galmudug iyo xallinta colaad Beeleed dhowaan ka dhacday degaanno ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud.
“Waxaan halkan u imi Inaan dhiirr gelinno dedaallada uu Ra’iisul Wasaaruhu halkan ka wado ee lagu nabadeynayo degaannada Galmudug, Galmudug oo toosta waa Hirshabeelle oo toosta” ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali , ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay imatinka Madaxweyne Waare iyo wafdigiisa, wuxuuna ku micneeyay booqashada madaxda Hirshabelle in ay yihiin Walaal dhab ah oo mar walbo u taagan Garab istaagga Galmudug.
;Madaxweyne Waare waxaa tahay tahay nabaddoonka Galmudug iyo Hirshabelle, waan kaaga mahacelineynaa sida mar walbo aad u Garab taagan tahay horumarinta Galmudug, iyo wel-welka aad ka qabto wax kasta oo Xagal daacinaya Galmudug, Ayuu yiri mudane ; Shaakir.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, ayaa ammaanay geeddi socodka loogu jiro in la helo Galmudug cusub, taas oo uu ku tilmaamay in dhammaan Dadka halkaasi ku dhaqan ay isla Jaan qaadaan, si laysaga Garabsasdo cadowda.
Wuxuu sheegay in Hirshabeelle iyo Galmudug aysan kala maarmin, xag nololeed ,xag amni iyo xag wax wada qabsi, wuxuuna sheegay in Labada maamul ay ku nool yihiin Dad walaalo ah oo aan sinnaba ku kala go’in, loona baahan yahay in is kaashadaan.